Kune vanhu vanopfuura zana zana mamirioni vane Apple Watch pane yavo ruoko | Ndinobva mac
Kune vanhu vanopfuura mamirioni zana vane Apple Watch pane yavo ruoko
Iyo Apple Watch inogona kutaridzwa seyakakodzera kwazvo Apple chishandiso pane zvese zviripo uye zvenguva dzese mune isiri kure kure ramangwana. Zvekurapa zvinogona kuve chinenge chakakosha gadget yevashandisi vazhinji uye yakashandiswa kuzvidzidzo zvekurapa. Zvenguva yacho nenhamba yemawachi mamwe asiri. Mumushumo mutsva, Pamusoro peAvalon muongorori Neil Cybart akataura izvozvo kune mamirioni zana Apple Watch iri kushandiswa izvozvi.
Pamusoro peAvalon muongorori Neil Cybart aburitsa gwaro rinoratidza kuti pari zvino pane vanhu vanopfuura mamirioni zana vari kushandisa Apple Watch. Maererano nekuongorora, Apple yakapfuura nhanho yakakosha muna Zvita 100. Izvo zvakawana izvi mushure mekutanga kweApple Watch Series 2020, Apple Watch SE uye Apple Fitness +. Nheyo yakasimbiswa yeApple Watch yakawedzera zvinoshamisa gore rega rega. Muna 6 chete, Apple yakatengesa iyo Apple Watch kune vanhu vane mamirioni makumi matatu, izvo zvinodarika huwandu hwevashandisi veApple Watch muna2020, 30, uye 2015 zvakabatanidzwa. Iyo ongororo zvakare inoratidza kuti angangoita 10% yevashandisi ve iPhone vanotova neApple Watch.
Naizvozvo, inofanirwa kutariswa kuti mumakore matanhatu ekuvapo yakatosvika mamirioni zana evashandisi. Asi izvo zvinonyanya kukosha iko kuratidzira kweiyo wachi. 10% yevaridzi ve iPhone vane Apple Watch. Izvi zvinoreva kuti iye achine nzvimbo yakawanda yekusvika uye kana runyerekupe rukazadzikiswa uye zvidzidzo zvekurapa zvikazadzikiswa, isu tinogona kunge tiine huwandu hwakapetwa katatu munguva pfupi.
Kutsvakurudza kunoratidza izvozvo Iyo Apple Watch parizvino iri yechina chigadzirwa chikuru cheApple. Kutanga isu tine iyo iPhone, ipapo paizove neiyo iPad uye pakupedzisira iyo Mac. Iyo wachi inotarisirwa kupfuudza komputa muna 2022.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kune vanhu vanopfuura mamirioni zana vane Apple Watch pane yavo ruoko
Iyo Apple TV + nhevedzano "Foundation" ichave ine makumi masere machitsauko